Dukaanka qamriga oo isaga guuraya xaafada Tensta | Somaliska
Dukaanka ay leedahay dowlada Sweden ee lagu iibiyo qamriga Systembolaget ayaa irdaha isugu dhufanaya qeybta ay ku leeyihiin xaafada soo galootiga u badanyihiin ee Tensta, Stockholm. Sababta ay u xirayaan dukaanka qamriga ayaa maamulku sheegeen in ay tahay maacamiishii oo ku yaraatay deegaanka iyo xaga amaanka dukaanka oo soo xumaaday. Qaar ka mid ah dadka ku xiran dukaankaas ayaa si weyn uga xumaaday in dukaankii qamriga uu ka fogaatay xaafada. Dhinaca kale dad badan ayaa soo dhaweynaya arintaan. Xaafada Tensta oo ka mid ah xaafadaha ay Soomaalida ugu badanyihiin ayaa waqtiyadii dambe waxaa ka socday barakac ay ka barakacayaan adeegyada dowlada iyo kuwa Swedishka. Waxaa ugu dambeeyay xafiiskii bankiga Nordea oo isaga guuraya xaafadaas. Dadka deegaanka ayaa sheegay in mustaqbalka xarunta Tensta Centrum uu shaki ku jiro. Systembolaget ayaa ah shirkad ay leedahay Dowlada Sweden oo qamriga iibisa. Waxay dukaamo ku leedahay guud ahaan wadanka oo dhan.
Dukaanka qamriga oo isaga guuraya xaafada Tensta
Dukaanka ay leedahay dowlada Sweden ee lagu iibiyo qamriga Systembolaget ayaa irdaha isugu dhufanaya qeybta ay ku leeyihiin xaafada soo galootiga u badanyihiin ee Tensta, Stockholm.
Sababta ay u xirayaan dukaanka qamriga ayaa maamulku sheegeen in ay tahay maacamiishii oo ku yaraatay deegaanka iyo xaga amaanka dukaanka oo soo xumaaday. Qaar ka mid ah dadka ku xiran dukaankaas ayaa si weyn uga xumaaday in dukaankii qamriga uu ka fogaatay xaafada. Dhinaca kale dad badan ayaa soo dhaweynaya arintaan.
Xaafada Tensta oo ka mid ah xaafadaha ay Soomaalida ugu badanyihiin ayaa waqtiyadii dambe waxaa ka socday barakac ay ka barakacayaan adeegyada dowlada iyo kuwa Swedishka. Waxaa ugu dambeeyay xafiiskii bankiga Nordea oo isaga guuraya xaafadaas. Dadka deegaanka ayaa sheegay in mustaqbalka xarunta Tensta Centrum uu shaki ku jiro.
Systembolaget ayaa ah shirkad ay leedahay Dowlada Sweden oo qamriga iibisa. Waxay dukaamo ku leedahay guud ahaan wadanka oo dhan.
Diyaar ma u tahay in aad Somalia ku noqoto haddii lagu siiyo lacag gacan qabsi ah?
Video: Kooxda Somalia oo ciyaarihii kale looga adkaaday balse goolasha yareeyay
Markii soo galootigu meel kusoo bataanba waa laga sii guurayaa siddii dad furuq amase daacuun qaba oo u baahan in meel gooni ah lagu karaantiilo oona laga fogaado, haddaba sidey ku dhacaysaa is dhexgalkii aad sheegeysay Jimcaalow sow tani markhaati kama ahan ineysan bulshada swedeshku diyaar u ahayn iney is dhexgal la sameeyaan dadka u yimid.
Markase laga reebo dukaankan qamriga sow soogalootu uma baahna hay’adaha kale ee dowliga ah xaqna uma lahan iney helaan adeegooda sida xaafadaha kaleba ay xaq ugu leeyihiin, maxaase la filan karaa hadey arrintu sidaan ku sii socoto aqyaareey.
khadija,waxad tiri dukankan qamriga markii laga reebo adeega kale soow uma bahna dadka? oo kan ad ka reebeeso soo dukan dowladeed maahan adeega dadka wadanka leh ay u baahan yihiin soow mahan maxad uga reebeesaa hadiidan u baahneen mad banankaas ka martaan illeen wax dad u bahan yihiine tan kale soogalooti dhan mahan waxa laga qaxayaa ee waa soomaali iyo africanka kale waxa laga ordayaa sababtoo ah waa dad cawaan nimadu lafaha ka gashay oo walan moodana inay fiyow yihiin siiba somalida waa wada wasaq uraysa qaladkana aan iska qaban wabilaahi towfiiq
Fikrad aan lala dhicin 4 10
same sxbw ma ahan in aad sidaas u af la gaadeeso somaliad teeda kale waxa aad ku tilmaameeso wasaq waa dad aad ka dhalatey waxane ku geeneeso dacfiic daro marka ka fiirso waxa aad qoreeso
waan necbahay cadowga soomaliyed says:
Asc ninakan isku shegay same waxad tahay mid qaldan oo jecel in la xumeeyo muslimka oo dhan mel uu joogo ama la cirib tiro lakin ogow cadowga ilahay ma guuleysto ilaa uu raali ka noqdo inta ilaah iyo rasuulkisa taqaan marka kula yaabi mayno waxa laga yabaa inad ka xunthay qamriga lagaa fogeyey laakin ilahay ha ku soo hanuuniyo han ku tuso kheyrka iyo jeclaanta dadkaga xaasidnimadu
qofkisa wey la harta bertan wey gelisa
June 23, 2012 at 13:54
Waxaa caddaan ah in dadka soomalida ay yihiin wax laga cararo oo aan qaarkooda ay ba waalan yihihiin bal u fiirsada qof qaxoti ah oo cayrtii la siiyey caleen qaad ah ku iibsanayo oo haddana isla fiican oo u haysta inuu dadka ugu fiican yahay. waxyaalaha la yaabka leh ee aad arkayso waxaa ka mid ah marka tareenka la saaranyahay waxaa ka dhex qayliya waa soomalida oo akliya dadka kale si hoose ayeey u sheekaysataan oo aan la dareemi karin. waxyaalaha la yaabka leh waxaa ka mid ah qof soomali ah ayaa kursiga tareenka waxaa uu saarayaa cimaamada ama taleefankiisa waxaana uu leeyahay laguma fariisan karo waayo qof kale ayaan u hayaa dadkii oo dhan ayaa uu ka celinayaa, qof alla qokii maaga ku fariiso waxaa uu leeyahay ka joog qof ayaan u hayaa waa wayaabaja la yaabka leh ee aan soomalaida ku arkay. waxaan dhihi lahaa dhaqan xumada ha la iska daayo dadka kale waa na daawanayaan waana nala yaabayaan waana na xamanayaan laakiin waxbo noo sheegi maayan waa inaan anaga ismaqalnaa waxna isu sheegnaa aqlaaqdeenna iyo dhaqankeenana waa inaan ilaalinaa
Sory ninka somali la baxay mahan in somali oo dhan ay ka simana yihin waxyalah aad xustay lakin wey jiraan balse magaca somalida ha wada xumeyn waxadm si sharaf leh oo codsi ku jiro u fahamsiisa dadka sida fiican lakin maha inad cayso somalida
June 23, 2012 at 14:33
Waxii xunba Soomaalibaa leh waa qalad weyn qofkuna waa xor oo kor xataa dadka dhan waa u hadlaan waase laga fiican yahay, cimaamadaa la saartaa ku lahaa yaaba cimaad ka qaata Sweden,kkkkk Nsiibkiis haddii dukaanku ka guurey Tensta howl na quseysa maahan.
June 23, 2012 at 14:45
Walaalheyga kala sita magacyada soomaali iyo same maku fekerteen in aad adinkuba kow ka tihiin magaca aad ceebta iyo caayda aad huwineysiin, haddii sida aad tiraahdeen aad tihiin dad waalan oo dhaqan xun oo cawaana ileynba idinba soomaali baa tihiine maxaad marka hore idinku isu sixi weydeen kadibna walaalahiina kale aad wax ugu sheegi weydeen. Halna ogaadaa bulsho walba oo nool iney posetiv iyo negativ ba ay leedahay aysan jirina bulsho wada fiican amaba wada xun.
Asc dhamantin horta in sogalitiga laga cararo waa wax loo jeeda balse wexeey aad u tabaneysa somalida oo ah dad aan xishoon sharcigana aan dhawrin waxa kamid ah ninka wata magaca Fm-Faa’id oo aaminsan in aad xor u tahay inaad wax walba sameysid waana wax aay somalida badankeeda aaminasanyihiin in yurub ninkii jooga uu wax walba sameyn karo taasi waa maangabnimo ee asageena naga reebtey dadkaan swdeshka wadankooda wey dhowraan weyna kolkoliyaan aad bey uga xunyihiin ineey arkaan anogoo sidii duqsigii mel walba iskuu tuureynaa bal aan isku noqono oo sidaan aan ku socono ka laabano
Fm-Faa`id To:- abba says:
Asc, Walaal Abba:- waad qaldan tahay anigu kuma oran wax kasta ayaad xor u tahay ee magaceyga ha iiga dheelin, anagu dad Islaam ah ayaan nahay wax kastana hor uma nihin waad ugu qaldantay ee isa sax wax kastoo akhlaaqda xun ahna ma taageersani,ee bes waxaa ka wadaa dad badan oo nooc walba leh oo isla socda oo mar mar aad u qeylinaya ma arkin, xor uma ahan miyaad leedahay hadalkaas,Yurub adigey wax kula tahay mindhee. Haa Soomaalidena waan qeylinaa laakiin maahan dadkoo dhan ee waa qeyb ka mid ah Soomaalideena, waxaan diidanahay waxii xunba Soomaalibaa leh thanks asc.
June 23, 2012 at 21:06
sooamali hadan nahay dhaqankenu ma wada xuma waxa jira dhaqamo xun ooy inagu kaliftay duruuuftu sida beenta oo xaarana taana waxa keenay wadankeenii oo burburay beenta waxan ka wadaa tan an swedishka u sheegno een isku dhiibno waxa jira dhaqan badan oo fiican oon leenahay waxan nahay dad masakinta cawiya waxan nahay dad is caawiya waxan nahay dad diinta si fiican ugu dhaqma waxa ku cadaynaya taa sida hablaha soomaliyeed ay u xijaabtaan eey ugu dhaganyihiin xijaakooda xataa ubadkan u xijaabnaa.markaa waxa fiican inan isku sheegno wanageena iyo xumanteenaba.dadkan caayaya somalida ee wa qudhun iyo waa cawaan low iskaga baxa somali waxan u malaynayaa kuwa ka faanaya inad tihiine lakin anuu ad an ugu faraxsanahay inan gabadh soomaliyeed ahay somalidana waxan u haystaa dad sharafle oo islama oo nadiifa
asc walayayal waad aragtaan meesha wax marayaane dalenii ilaahow noo dawee adigaa casiisee haloo duceyo wadankii iyo dalkii fadlan qofkii damqasho ku jiro